အစာအိမ်ရောဂါ/အနာရှိသူများစားသင့်သောအစားစာမျာ – သုတရသ
အစာအိမ် အနာရှိသူ တွေအနေနဲ့ မတည့်တဲ့အစာစားမိရင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အလွန်အမင်း ဗိုက်အောင့်တဲ့ဝေဒနာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရင်ပူနာ၊ ပျို့တာ၊ အန်တာနဲ့ လေပွတာတွေက မိမိနဲ့ မတည့်တဲ့ အစာစားမိတာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ထို့ကြောင့် အစာအိမ်အနာရှိသူတွေအနေနဲ့အစားအသောက်ကို ရွေးချယ်ပြီး စားသောက်သင့်ပါတယ်။ အောက်ပါအစားအစာတွေက အစာအိမ်အနာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာနိုင်သလို အနာကျက်ဖို့လည်း ကူညီနိုင်ပါတယ်။
သစ်သီးတွေမှာ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အစာအိမ်အနာရှိသူတွေ စားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အက်စစ် ဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ သစ်သီးတွေက ဝေဒနာကို ပိုဆိုးရွားစေနိုင်တာကြောင့် ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ကီဝီသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ စပျစ်သီး၊ ပန်းသီး၊ ပန်းသစ်တော်၊ ဘယ်ရီသီး၊ ထောပတ်သီး၊ သင်္ဘောသီးနဲ့ သခွားမသီးတွေက အက်စစ်ပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့် အစာအိမ်အနာရှိသူတွေ စားသုံးသင့်တဲ့ သစ်သီးတွေပါ။
ပျားရည်က ချိုပြီး အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အပြင် ဘက်တီးရီးယား ကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျားရည်ဟာ H-Pylori ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အစာအိမ်အနာကို ကုသဖို့ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ မနက်အိပ်ရာ ထခါစမှာ စားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ ပျားရည်ကို သောက်ပြီး ဗိုက်အောင့်တာနဲ့ တစ်ဇွန်း သောက်ပေးပါ။
၃. Cruciferous အမျိုးအစား ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ဘရိုကိုလီ၊ ကိုက်လန်၊ မုန်လာဥ၀ါလိုမျိုး Cruciferous အမျိုးအစား ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ဘက်တီးရီးယားကို တွန်းလှန်နိုင်ပြီး အဆိပ်အတောက်တွေကို ပျက်ပြယ်စေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ ဆာလဖာသတ္တုဓာတ်တွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့မှာပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ် များစွာ ၀မ်းမချုပ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်အတွင်း လူ့အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေ ပွားများနိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
သင်ရဲ့ အစာအိမ် လမ်းကြောင်းအတွင်းမှာ လူ့အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယား တွေ များစွာ ရှိနေတာက အစာအိမ်အနာရှိသူရော၊ မရှိသူအတွက်ပါ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်စားသုံးတာက လူ့အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယား တွေကို များစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။
၅. အဆီပါဝင်မှုနည်းသော နို့နှင့် အဆီ မပါသော အသား များ
ဗိုက်နာမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အစာအိမ်အနာကျက်ဖို့အတွက် ပရိုတင်းကို စားသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အသားတွေမှာ ပရိုတင်းပါဝင်မှု အများဆုံးဖြစ်တာကြောင့် အဆီ မပါတဲ့ အမဲသား၊ ၀က်သား၊ ကြက်သားနဲ့ ဆိတ်သားတွေကို စားပေးပါ။ ကြက်အရေခွံနဲ့ ၀က်ခေါက်လိုမျိုး အဆီပြင်တွေက အစာအိမ်အနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာလည်း ပရိုတင်းပါဝင်မှုများတာကြောင့် စားသုံးသင့်ပေမယ့် အဆီ ပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အမျိုးအစားကို စားသုံးတာက အကောင်းဆုံးပါ။
အကြောသေနေတဲ့ဖခင်ကို အချိန်ပြည့်ဂရုစိုက်နိုင်အောင် တက္ကသိုလ်အဆောင်မှာ ခေါ်ယူပြုစုပေးနေခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလေးရဲ့ အဖြစ်